Xawaaraha buuxa ee Royal Caribbean ayaa sii socda xitaa ka dib markii laba caruur ah ay qabteen COVID-19 markab dalxiis
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Mareykanka » Xawaaraha buuxa ee Royal Caribbean ayaa sii socda xitaa ka dib markii laba caruur ah ay qabteen COVID-19 markab dalxiis
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Mareykanka • saaciday inay • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
'Waan Soo Laabanay!' Kooxda Royal Caribbean Group ayaa dib u bilaawday Markabkii Mareykanka ee Maanta
Royal Caribbean Group, oo ay weheliyaan saraakiisha maxalliga ah, ayaa xusay taariikh muhiim ah oo ku saabsan safarka shirkadda safar si ay dib ugu bilawdo howlaheeda markab casri ah, oo qaali ah, Celebrity Edge. Maalintii sida weyn loo sugayay waxay calaamadeysay markabkii ugu horreeyay ee ka dhoofa deked Mareykan ah kadib markii warshadaha laga joojiyay adeegga.
Waxaan ku faraxsanahay inaan mar kale ku soo dhaweyno martida markabka, annaga oo ka soo shiraacanayna Koonfurta Florida, gurigeenna, ”Richard Fain, Royal Caribbean Group, Guddoomiyaha iyo Maamulaha ayaa yiri.
"Maanta waa maalin u horseedaysa xawaare warshadeena iyo shakhsiyaad aan la tirin karin iyo bulshooyinka dekedda leh ee adduunka oo dhan oo qayb ka ah safarkayaga iyo soo dhaweyntayada."
Heerarka caafimaadka iyo nabadgelyada ee Kooxda Royal Caribbean waa dhammaadka in ka badan hal sano oo hawlkar ah oo ay qabteen Guddigeeda Caafimaadka Sail iyo wada-hawlgalayaasha warshadaha, iyo iskaashiga ay la leeyihiin saraakiisha dowladda oo leh ujeedo gaar ah oo mudnaanta siineysa caafimaadka iyo badbaadada martida, shaqaalaha, iyo bulshada. way soo booqataa.
Markab laga soo raray Bahamas oo ay saarnaayeen labo rakaab oo dhalinyaro ah oo aan la talaalin oo saarnaa markab Royal Royal International Cruise oo ka baxay Bahamas ayaa laga helay baaritaanka coronavirus, safarka markabku wuxuu yiri.
Rakaabka, oo ka yaraa 16 jir kuna safraya isla kooxdan, ayaa ka tagay Adventure of the Seas ka hor dhamaadka safarka Khamiista ee Freeport iyaga iyo saaxiibadood. Waxay ku noqdeen wadankoodii Florida diyaarad qaas ah oo ay soo diyaarisay shirkada markabku, ayuu madaxa shirkada Michael Bayley ku yidhi a Facebook post.
Waxay ahayd xusuusintii ugu dambeysay ee dhibaatada ah in fayraska laga ilaaliyo maraakiibta dalxiiska - iyo tijaabadii ugu dambeysay ee hab maamuuska loogu talagalay in laga ilaaliyo sirta faafitaanka markabka.
Ka soo raridda Mareykanka ee saaran maraakiibta waaweyn waa la xiray ilaa Maarso 2020, laakiin safaradii ugu horreeyay ayaa lagu wadaa inay ka bilaabmaan Royal Caribbean Koox, Caanka Celebrity. Maalintii sida weyn loo sugayay waxay calaamadeysay markabkii ugu horreeyay ee ka dhoofa deked Mareykan ah kadib markii warshadaha laga joojiyay adeegga.
Kooxda Royal Caribbean Group waxay tan ka leedahay Celebrity Edge:
Laga soo bilaabo jaantusyadii ugu horreeyay ee lagu soo arkay naqshadahan qaab-dhismeed dhab ah oo la taaban karo, tallaabo kasta waxaa lagu sameeyay 3-D. Laga soo bilaabo cajiibka cusub ee loo yaqaan 'Magic Carpet®' ilaa barkadaha gaarka loo leeyahay ee ku yaal daaradeena cusub ee 2-geesoodka ah 'Edge Villas', waxaan qaabeyn karnay markabka ugu caansan badda. Naqshadeynta gaarka ah ee wajiga-ujeeda ayaa ka jaban naqshadeynta markabka dhaqanka. Dusha sare, waxaad dareemi doontaa xiriir dheeri ah oo ku saabsan badda iyo meelaha aad ku booqan doontid meelo kala duwan oo ka bilaabma Dugsiyadayada 'Edge Staterooms' oo leh 'Infinite Verandas to', illaa dib-u-habeynteenna, barkadda barkadda leh ee bixisa xitaa aragtiyo aad u ballaaran oo ku saabsan meelaha loo socdo badda.